Dharka hurdada ee Poly |Shirkadda Wonderful Manufacture And Trade Company Limited waxay ku saleysantahay Maraykanka
Waa maxay sababta aad u dooranayso dharka jilicsan ee jilicsan
Dharka jiifka ee jilicsan ayaa noqon kara doorashadaada ugu fiican haddii aad raadinayso dhar raaxo leh oo aad ku xidhato guriga .Inkasta oo ay jiraan noocyo badan oo bajamas ah, dharka jilicsan ee jilicsan ayaa ah mid raaxo leh, waxayna ku siinayaan raaxo weyn iyo ilaalinta cimilada qabow.Si aad fikrad ku siiso, waxaanu kula wadaagi doonaa sababta aad u dooranayso jilicsandhar hurdo badan.
Polyester-ku waa walxo aad u lallaagsan, xoog badan, oo neefsan kara.Maaddadani kaliya kama dhigayso dharkaaga jiifka inay dareemaan siman oo raaxo leh inaad xidhato laakiin sidoo kale waxay jidhkaaga ku ilaalinaysaa qabow xilliyada kulul.
Si ka duwan dharka kale sida suufka ama linenka,dharka hurdada ee polyester-kakuguma dareensiin doono kuleyl aad u kulul marka xagaaga yimaado sababtoo ah waxay leedahay sifooyin aad u fiican, taas oo macnaheedu yahay inay si dhakhso ah dhididka uga wareejin karto gudaha dharka ilaa dusha sare, halkaas oo uu si dhakhso ah uga bixi karo.
Dhanka kale, isagoo miisaankoodu yar yahay oo si adag loo toleeyey, polyesterku wuxuu yareeyaa iftiinka, taasoo ka dhigaysa dhar aad u fiican maalmaha qorraxdu iyadoo weli maqaarkaaga ku ilaalinayo diiranaanta habeenkii qaboobaha.
Intaa waxaa dheer, polyester-ku waa hypoallergenic, sidaas darteed xitaa kuwa maqaarka xasaasiga ah waxay ka faa'iideysan karaan xirashada noocyadan dharka jiifka ah.
Isku soo wada duuboopoly satin pajamasaad ayay ugu talinayaan dhakhaatiirta iyo naqshadeeyayaasha dharka labadaba dareenka taabashada dabiiciga ah ee ka dhanka ah maqaarkeena taasoo naga caawisa hurdo fiican.
Ikhtiyaarada Midabka badan
Polyester-ka inta badan wuu ka diiran yahay suufka laakiin uma diirna sida dhogorta oo kale.Waxay ka fogayn kartaa qoyaanka jidhkaaga, sidaas darteed waxay kaa caawinaysaa inaad qaboojiso xagaaga iyo kulaylka jiilaalka.Intaa waxaa dheer, waa mid aad u adkaysata laalaab, taas oo macnaheedu yahay in ay qaadan doonto boos yar marka la kaydiyo.
Sababtoo ah waa synthetic, si kastaba ha ahaatee, haddii ay soo baxdo iftiinka qorraxda wakhti dheer, waxay soo jiidan kartaa caaryada ama caariyaysi waqti ka dib.
Polyester-ka waxay caadi ahaan ka dheeraan doontaa dharka kale iyada oo aan la gashan ama waxyeello u geysan xirashada maalinlaha ah.Intaa waxaa dheer, dad badan ayaa door bida polyester sababtoo ah dareenkeeda fudud iyo xulashada midabka weyn.
Haddii ay wasakh noqoto,dhar hurdo badanMashiinku waa la dhaqi karaa oo si degdeg ah u engegan.Markaa haddii si habboon loo daryeelo, qayb ka mid ah PJ-yada polyester-ka ayaa socon kara sannado ka hor inta aan loo baahnayn beddelka.
Xitaa haddii aad kaliya ku dhex seexato guriga adigoon waxba shidin marka laga reebo PJ-yadaada, waa inay wali dareemaan wax weyn oo ka soo horjeeda maqaarkaaga.Ka dib oo dhan, taasi waa shaqadooda!Iyo maadaama moodooyin badan ay sidoo kale bixiyaan shaqeynta sida daryeel-fudud, neefsasho, iyo iska caabbinta dhimista dhididka marka la seexanayo, maxaadan u rabin lammaane?Kaalay dooro go'anpajamas satin polyester ahMidabka aad jeceshahay!
Muxuu Yidhi Macaamiishayadu?
Dharka Hurdada ee Polyester-ka Midabku Miyay Ba'ayaan?
Pls naga hubi warbixinta imtixaanka SGS.Si looga hortago in midabku dhoco.
Waxa ay tahay in aad samayso ka hor inta aanad iibsan aDharka hurdada ee Poly ?
Midab-beelitaanku waa mid ka mid ah sababaha ay qaar ka mid ah wax-soo-saareyaasha u waayaan macaamiishooda.Mise maxaad ka filaysaa macmiilka aan lacagta ku qiimaynayn?Ma jirto si uu ugu noqdo isla soo saaraha iibsi labaad.
Ka hor inta aan la helindhar-gaaban oo dhar ah, weydii soo-saarehaaga inuu ku siiyo warbixinta tijaabada midabaynta dharka poly satin.Waxaan hubaa inaadan rabin maro poli ah oo midab beddela ka dib markaad maydho laba ama saddex jeer.
Warbixinada shaybaadhka ee midabka midabku waxa ay muujinayaan sida ay alaabtu u waarto.
Aan si kooban u sharaxo waxa uu yahay midabka midabku waa habka lagu tijaabinayo cimri dhererka marada, marka la eego sida dhakhsaha leh ee ay uga jawaabi doonto noocyo kala duwan oo ah wakiilada sii libdhaya.
Iibsad ahaan, hadday tahay macmiil toos ah ama tafaariiqle/jumladle, waa lama huraan inaad ogaato sidadhar-gashiyo badan oo hurdo ahwaxaad iibsanaysaa falcelinta dhaqidda, kafeega, iyo iftiinka qorraxda.Intaa waxaa dheer, midabka midabku wuxuu muujinayaa heerka caabbinta dharka ee dhididka.
Waxa laga yaabaa inaad doorato inaad iska indhotirto qaar ka mid ah faahfaahinta warbixinta haddii aad tahay macmiil toos ah.Si kastaba ha ahaatee, samaynta tan iibiye ahaan waxay u dejin kartaa ganacsigaaga warqad hoose.Adiga iyo anigu waxaan ognahay in tani ay kaa fogayn karto macaamiisha haddii ay marada xumaato.
Macaamiisha tooska ah, doorashada in la iska indho tiro tafaasiisha warbixinta ugu dhaqsiyaha badan waxay ku xiran tahay tafaasiisha la doonayo ee dharka.
Waa kan sharadkaaga ugu fiican.Ka hor inta aan la soo dejin, hubi waxa soo-saareyaashu ay bixinayaan inay buuxiyaan baahiyahaaga ama shuruudaha macaamiisha aad beegsanayso sida ay xaaladdu tahay.Sidan, uma baahnid inaad ku dhibtoonayso haynta macmiilka.Qiimaha ayaa ku filan inuu soo jiito daacadnimada.
Laakin haddii aan warbixinta tijaabada la heli karin, waxaad adigu samayn kartaa xoogaa baaritaanno ah.Codso qayb ka mid ah marada aad ka iibsanayso warshadeeyaha oo ku maydh biyo koloriin leh iyo biyaha badda.Ka dib, ku cadaadi birta dharka lagu dhaqdo oo kulul.Dhammaan kuwan waxay ku siin lahaayeen fikrad ah sida ay u waartodharka hurdada ee poly materialwaa
Polyester-ku waxa uu leeyahay sifooyin badan oo la mid ah suufka--si fiican buu u dahaadhay, si fiican buu u qaataa midabada, waxaana lagu dhaqi karaa heerkul sare iyada oo aan la duuduubin ama laalaabin.Badanaa way ka jilicsan tahay suufka oo way ka adkeysi badan tahay xariirta.Polyester waxay leedahay awood qoyaan badan oo ka badan xariirta, markaa haddii aad rabto inaad xirto xagaaga, waxay u yihiin doorasho aad u fiican.
Polyester-ka waa dhar aad u raaxo leh, taas oo ka dhigaysa doorasho weyn oo loogu talagalay dhar-hurashada.Waxa intaa dheer, awooddeeda qoyaanka-jilicsan ee aadka u fiican waxay kaa caawinaysaa in jidhkaagu ku hayo heerkul caafimaad leh, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon in la seexdo agagaarka habeennadaas qabowga ah.Markaa maxaad u cusboonaysiin weyday lammaane jilicsandharka hurdada ee satin polymaanta?
Dhammaan waxaad u baahan tahay waa noo ogeysii fikradaada, waxaanan kaa caawin doonaa inaad sameyso, laga bilaabo naqshadeynta mashruuca iyo badeecada dhabta ah. Ilaa iyo inta la toli karo, waan sameyn karnaa. MOQ waa 100pcs / midab.
Kaliya noo soo dir summadaada, summadaada, naqshadeynta xirmada, waxaan sameyn doonnaa farshaxanka si aad u yeelan karto muuqaal si aad u sameyso dharka hurdada ee poly qumman, ama fikrad aan ku dhiirigelin karno.
Dharka hurdo ee caadiga ah ee la habeeyey iyo tirada ka hooseysa 500 oo xabbo, wakhtiga hogaanka waa 15 maalmood gudahood tan iyo markii la dalbaday.